Enwere iwu ise maka mmezi matarasị. Enwere m olile anya na ọ ga -enyere gị aka iwepụta obere oge iji banye n'abalị ka mma karịa uzuzu, izizi, wdg
Ịchị 1: Air your mattress every day
Every night, onye ọ bụla n'ime anyị na -atụfu ihe dị ka ọkara otu pint mmiri mgbe anyị na -ehi ụra, nke na -emepụta ebe dị mma maka ntụ ntụ ma nwee ike ibute ntụpọ. Mepee windo tupu ị kụọ hay, nke ga -enyekwa aka ịchịkwa iru mmiri n'ime ụlọ ihi ụra gị nke na -ahụ oke oke.
Ịchị 2: Na -asa akwa ụra kwa izu - opekempe!
Gbaa mbo mbinye uzuzu ume ibiri na akwa gị site na -agbanwe akwa na akwa mkpuchi ọ dịkarịa ala otu ugboro n'izu wee sachaa ha n'obere okpomọkụ nke 60 Celsius..
Jiri ihe nchedo matraasi a na -asachapụ nke igwe iji nyere aka kwụsị ọsụsọ ma ọ bụ mmiri ndị ọzọ ịbanye na matarasị gị.. Sichaa ya otu ugboro kwa ọnwa abụọ na oke okpomọkụ kacha atụ aro na akara nlekọta.
Ịchị 3: Vacuum your mattress regularly
Unpalatable as this may be, onye ọ bụla n'ime anyị na -efunahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara kilogram nke mkpụrụ ndụ akpụkpọ anụ nwụrụ n'afọ ọ bụla, na ụfọdụ n'ime nke a ga -ejedebe na matarasị anyị.
Ọzọ, nke a nwere ike rụọ ọrụ dị ka magnet maka ntan uzuzu. Debe uzuzu na mkpụrụ ndụ akpụkpọ anụ nwụrụ anwụ site na ị na -ehicha akwa gị otu ugboro n'ọnwa na ọnọdụ ịmịkọrọ mmiri dị ala, na -eji mgbakwunye ihe nhicha ihe nhicha ihe nhicha gị.
Ịpị n'akụkụ ọnụ matarasị gị nwere ike ịkwalite uzuzu uzuzu na mkpụrụ ndụ akpụkpọ anụ nwụrụ anwụ, dị ka bọtịnụ ike, ya mere tinye ebe ndị a nlebara anya pụrụ iche.
Ịchị 4: Check if you should turn your mattress80°
Check if you should turn your mattress80° and flip weekly for three months after you buy them, mgbe ahụ otu ugboro n'ime ọnwa atọ ma ọ bụ anọ. Iji nyere gị aka icheta mgbe ị ga -atụgharị ma ọ bụ na -atụgharị akwa gị, dee ihe ncheta na kalịnda gị ma ọ bụ tọọ ọkwa na ekwentị gị.
Ịchị 5: Act fast on spills and stains
As with most stains, ogologo oge ị na -ahapụ ntụpọ matarasị, ọ ga -esiri ha ike ịgbanwe.
Mkpado: Zụrụ sofa setịpụrụ, nhazi akwa
Oge ezipụ: 2020-07-06